बोक्सीको आरोपमा युवती कुटिदा रमिते बनेका मेयरको लाजमर्दो जवाफ – Peacepokhara.com
काठमाडौं २७ फागुन । ‘बोक्सीकाण्ड’ मा मुछिएका कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाका मेयर ममताप्रसाद चौधरीमाथि नेकपा एमालेले कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
गत विहीबार स्थानीय युवती राधा चौधरीमाथि झाँक्री रामबहादुर चौधरीले दुर्व्यबहार गर्दा मेयर ममताप्रसाद चौधरी रमिते बनेको समाचार आएपछि एमालेले उनीसँग स्पष्टीकरण लिएको छ । मेयर चौधरी एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य तथा बुद्धिजीवी परिषदका जिल्ला उपाध्यक्षसमेत हुन् ।
पार्टीले चौधरीसँग मौखिक स्पष्टीकरण लिइसकेको र अब छानविन कमिटी गठन गरी थप प्रक्रिया अघि बढाउने जिल्ला इन्चार्ज तथा कैलाली २ का सांसद झपट रावलले बताए । तत्काल कैलाली जिल्ला कमिटी पदाधिकारी बैठक राखेर छानविन समिति गठन गर्न आफूले जिल्ला अध्यक्षलाई निर्देशन दिइसकेको रावलले बताए ।
नयाँपत्रिका दैनिकले प्रकाशित गरेको मेयर चौधरीको अन्तरवार्ता यस्तो छः
त्यसोभए किन जानुभएको त चौकीमा ?
आफ्नो नगरपालिकाभित्रकी बासिन्दामाथि बोक्सीको आरोपमा कुटपिट भएको छ, सार्वजनिक रूपमा दुव्र्यवहार भएको छ, तर ती को रहिछन्, के गर्छिन् भन्ने विषयमा तपाईंलाई चासो भएन ?
गोठमा गोबर सोहोरिरहेकी बालिकालाई लछारपछार गर्दै लगेर सात घन्टासम्म कुटपिट भएको छ, ती बालिका कसकी छोरी हुन्, तर आफ्नो गाउँ-टोलकी ती बालिकाको विषयमा तपाईंलाई ३० घन्टासम्म पनि जानकारी किन छैन ?
नामचाहिँ ममताप्रसाद कसले राख्यो होला रु तपाईं त निष्ठुरप्रसाद हुनुहुँदोरहेछ ?
तर, आजसम्म जे भयो भयो, पीडितहरू अस्पतालमा छन्, मिल्यो भने भोलि गएर भेटिदिनुहोला, उनका गुनासा सुनिदिनुहोला । कारबाही के भयो भनेर हामी भोलि पनि फोन गर्छौ
ठीकै छ, बिहानै नगर्नुहोला, बेलुका गर्नुहोला ।
नेल्टाले स्थापना दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरि मनाउने, कास्कीमा निशुल्क पशु स्वास्थ्य शिविर
Krishna Dawadi 04 Jun 2018
गजल प्रतिभा पुरस्कार कपिललाई
peacepokhara 02 Aug 2016